Cabashada AMISOM ee Mushaharka - BBC News Somali
Cabashada AMISOM ee Mushaharka
22 Abriil 2011
Askar ka tirsan ciidanka nabad-ilaalinta ee AMISOM ee jooga Muqdisho ayaa BBC da u sheegay cabashooyin ku lug leh mushaharka oo aan si joogto ah loo helin bil walba.
Ciidanka ka socda Burundi waxay sheegeen in wixii ka danbeeyey bishii December ee sanadkii hore aanay weli helin wax mushahar ah. Waxa kale oo ay cabashadaasi ku dareen in aan wax magdhaw ah la siin qoysaskii askartii ku dhimatay dagaallada Muqdishu.
Cabashadani oo haatan ka soo yeedhay gaar ahaan askarta reer Burundi ee joogta magaalada Muqdishu ee ka tirsan ciidamada Amisom, waxay intaasi ku dareen in loo sheegay in dhibaatadu ka jirto dhinaca Ururka Midowga Afrika.
Waxase ay muujiyeen askartaasi in ciidanku uu aad u niyad jabsan yahay, sababta oo ah qoysaskoodii oo isweydiinaya halka musharooyinkoodii ay maraan amma ku maqan yihiin.
Dhinaca kale, afhayeenka ciidamada dalka Burundi ee jooga Bujumbura oo BBC du la xidhiidhay ayaa isagu xaqiijiyey in dhibaatadaasi mushaharka daahay ay jirto, hase ahaatee waxa uu ku tilmaamay inay tahay arrin xagga maamulka la xidhiidha oo mamar dhacda, laakiin in aanay ahayn lacag la’aan.
Waxa kale oo uu intaasi ku daray in dhawr jeer oo horeba ay soo raagtay lacagtu, laakiin in aakhirka la helo mushaharka.